Apple Mamporisika ny fanabeazana zazavavy ao amin'ny Malala Foundation | Avy amin'ny mac aho
Mbola misy vaovao mifandraika amin'i Apple sy ireo dingana mankany amin'ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy ihany koa isika, ary koa ny dingana raisin'ny orinasa amin'ny zon'olombelona. Amin'ity tranga ity, ny anaran'ny fototra dia Fundación Malala ary Apple no mpiara-miasa voalohany.
Ny Malala Foundation dia manohana ny uñí amin'ny fanabeazana zazavavy, ary koa ny fotoana sahaza azy ary tarihin'ny mpandresy amin'ny loka Nobel fandriampahalemana, Malala Yousafzai.
Rehefa miditra i Apple dia antenaina fa ny vatsim-pianarana misy dia azo alaina amin'ny olona roa heny. Amin'izao fotoana izao ity fototra ity dia efa manohana vatsim-pianarana ao amin'ny tamba-jotra Gulmaki. Apple hanampy amin'ny teknolojia sy fikarohana momba ny fanovana tokony hatao hanampiana ny zazavavy eran'izao tontolo izao handeha hianatra hamita ny fianarany ity.
Amin'ny maha-antsipiriany manan-danja azy, azontsika atao ny manasongadina fa ny Tim Cook, PDG de Apple, dia ho anisan'ny filankevi-pitantanan'ny Foundation.
Androany dia misy mihoatra ny Ankizivavy 130 tapitrisa tsy afaka mianatra, ary io dia eo amin'ny fiaraha-monina misy azy ireo, ny asa dia mandresy noho ny fianarana. Noho izany, ny tamba-jotra misy ny Malala Foundation, ny Tambajotra Gulmakai, Manohana ny programa any Afghanistan, Pakistan, Lebanon, Turkey ary Nizeria amin'izao fotoana izao.
Tsy isalasalana fa fandraisana andraikitra milaza zavatra betsaka momba an'i Apple sy i Tim Cook ny tenany, saingy tsy mahagaga raha ity karazana fandraisana an-tanana ao amin'ny Apple ity, orinasa iray izay nandinika ny fahasamihafan'ny mpiasa ao aminy, ny fotoana mitovy ary ny fanaraha-maso, ao anatin'izany ireo mpamatsy azy, mba hialana amin'ny fanararaotan-jaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple dia mamporisika ny fanabeazana zazavavy ao amin'ny Malala Foundation
Ny mpampiasa sasany dia afaka nampidina ny Tag: Ragnarok tao amin'ny iTunes iray volana talohan'ny nahitana azy